မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချတယ်လို့ ဥရောပသမဂ္ဂ ထုတ်ပြန် – Voice of Myanmar
ဥရောပသမဂ္ဂကောင်စီ ၂၇ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအပေါ် ဆွေးနွေးမှု နိဂုံးချုပ်ရလာဒ်များ(၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁)
၁. ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာပြည်မှ ပြည်သူများနှင့်အတူ ရပ်တည်လျက်ရှိပြီး ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်၏ အာဏာသိမ်းမှုကို အပြင်းထန်ဆုံးရှုတ်ချပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးအခင်းအား အရှိန်အဟုန်မြင့်တက်လာမှု မရှိစေရန်အတွက် အရေးပေါ် အခြေအနေကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ရန်၊ အရပ်သားအစိုးရ ပြန်လည်ထူထောင်ရန်နှင့် အသစ်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသော လွှတ်တော်ကို ဖွင့်လှစ်ရန်တို့ကိုလည်း တောင်းဆိုလိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်က ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနှင့်အညီ ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အလေးထားလိုက်နာရမည်။ တပ်မတော်သည် မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုကို စွန့်လွှတ်ရမည်။
၂. ဥရောပသမဂ္ဂသည် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ‌ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အခြားသော ဖမ်းဆီး၊ ချုပ်နှောင်ခံထားရသူများအားလုံးကို ချက်ချင်းခြွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးရန် စစ်အာဏာရှင်များအား အထူးသဖြင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ထို့အပြင် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များအား ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမရှိစေရန်၊ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခွင့်၊ စု‌ဝေးစည်းရုံးခွင့်၊ သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိသုံးစွဲခွင့်အား အာမခံပေးရန်၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများနှင့် တရားဥပ‌ဒေစိုးမိုးမှုကို လေးစားလိုက်နာရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေသူများအား စစ်တပ်နှင့် ရဲများက ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကိုလည်း ရှုပ်ချပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ အာဏာပိုင်များမှ အတတ်နိုင်ဆုံး ချုပ်ထိန်းမှုကိုကျင့်သုံးရန်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုအား နှစ်ဖက်လုံးမှရှောင်ကြဉ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာပြည်သူပြည်သားများက မိမိတို့ရွေးချယ်ထားသည့် အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီအတွက် မိမိတို့၏အခြေခံအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးကာ ငြိမ်းချမ်းစွာ စု‌ဝေးပြီး တရားဝင်အရပ်သားအစိုးရနှင့် လွှတ်တော်အား ထောက်ခံနေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးနှင့်အတူ ရပ်တည်နေပါသည်။
၃. ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၊ အမျိုးသားပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး၊ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများနှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအား စွဲစွဲမြဲမြဲ ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် တရားဝင် ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်းတရပ်အား အမြန်ဆုံးအာဏာကို ပြန်လည်ခန့်အပ်နိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုးပေးရန်အလို့ငှာ အခြေအနေကို စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့် ဖြေရှင်းလိုသော အဓိကသက်ဆိုင်သူများအားလုံးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ကူညီထောက်ပံ့ရန် အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။
၄. ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်အား လေးစားလိုက်နာ စေရန်အလို့ငှာ ဒီမိုကရေစီ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ကူညီပံ့ပိုးလိုသည့် ဆန္ဒရှိသော သူများ နှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမည်။ ထို့ကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် ဒေသအတွင်းနှင့် အခြားသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကို လုပ်ဆောင်သွားမည်။ ထို့အတူ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မဟာဗျူဟာ‌မြောက် မိတ်ဖက်များဖြစ်သည့် (ASEAN) အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့အား လေးစားတန်ဖိုးထားကာ ‌ဒေသတွင်း လုပ်ဆောင်မည့် ပဏာမခြေလှမ်းအား အားပေးတိုက်တွန်းမှုပြုပါသည်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းမှုအား ကြိုဆိုကာ မြန်မာနိုင်ငံအား ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရန် အလို့ငှာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ အဆင့်မြင့်ကိုယ်စားလှယ် Schraner Burgener ၏ အစဉ်တစိုက် အားထုတ် ကြိုးပမ်းမှုအား အပြည့်အဝ ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါသည်။
၅. ဥရောပသမဂ္ဂသည် ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းပေးပို့မှုများအား အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိပါသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ခိုင်မာသော ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်မှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအား ကာကွယ်စောင့်ရှောင့်သူများနှင့် မီဒီယာသမားများအား ကူညီပံ့ပိုးမှုတို့အား အဓိကထားကာ ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်သွားမည်။
၆. စစ်အာဏာသိမ်းမှုအား တုန့်ပြန်သောအားဖြင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် တိုက်ရိုက်တာဝန်ရှိသူများအား ဦးတည်ကာ ကန့်သတ်ထိမ်းချုပ် အရေးယူမှုများကိုလည်း လုပ်ဆောင်သွားရန် အဆင်သင့်ရှိနေပါသည်။ အခြားသော အရေးယူမှုပြုမည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂသည် မြန်မာပြည်သူများအား အထူးသဖြင့် ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိသူများအား ထိခိုက်နိုင်သည့် အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရှားသွားမည် ဖြစ်သည်။ ကောင်စီသည် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဥရောပကော်မရှင်အား သင့်လျော်သည့် အဆိုပြုချက်များကို လုပ်ဆောင်သွားရန် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။
၇. ဥရောပသမဂ္ဂသည် စာနာမှု၊ ကြားနေမှု၊ ဘက်လိုက်မှုမရှိ၊ လွတ်လပ်မှုရှိသော စသည့် အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အညီ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ဒုက္ခသည်နှင့် ပြည်တွင်းရွေ့ပြောင်းသူများအား ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမည်။
ထို့အပြင် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရိုဟင်ဂျာ အလှူရှင်များဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတွင် ကတိပြုထားသည့်အတိုင်း ယခင်က ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အညီ ရိုဟင်ဂျာများကိုလည်း လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများကို ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂသည် လိုအပ်ပါက အကူအညီလိုအပ်သူများ အားလုံးအတွက် လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများကို အဆင်သင့် ကူညီပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် ဟန့်တားမှုမရှိစေဘဲ လွတ်လပ်စွာ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှုအား ပံ့ပိုးနိုင်ရန် အတွက် ထပ်လောင်းတောင်းဆိုပါသည်။
ကောင်စီသည် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အရေးအခင်း၏ အဓိကဇစ်မြစ်များကို ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံနှုန်းနှင့်အညီ ဒုက္ခသည်နှင့် ပြည်တွင်းရွေ့ပြောင်းသူများအား လုံခြုံမှု၊ ရေရှည်တည်တံ့သော၊ သိက္ခာရှိစွာ ပြန်လာနိုင်စေရန် အခြေအနေတရပ်ကို ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းပြောကြားလိုသည်။
၈. ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဆက်ဆံရေးအား ဆက်လက်ထားရှိရန် သဘောတူထားသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါဆက်ဆံရေးအား စဉ်ဆက်မပြတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ကာ သင့်လျော်သည့်နောက်ထပ် အရေးယူမှုများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
#VoiceOfMyanmar #VOM #EU_in_Myanmar #အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချ